प्रतिबन्धित भारतीय रूपैयाँ भित्रिन थाल्यो
काठमाडौं । भारतमा प्रतिबन्धित पाँच सय र एक हजार दरका नोट नेपाल आउन थालेका छन् । खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट नेपालमा प्रतिबन्धित नोट भित्रिन थालेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी दे...
ससुरालीबाट गाउँपालिका प्रमुखको अपहरण
काठमाडौं । ससुरालीमा पाहुना लाग्न पुगेका रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विर बहादुर घर्तीलाई अज्ञात ब्यक्तिहरुले अपहरण गरेका छन् । बिहीबार राती थवाङ–२ स्थित ससुराली घरमा सुतीरहेका घर्तीलाई अज्ञात ...
ज्यानमारा र सगठित अपराधी राष्ट्रपति बन्न पाउने ?
काठमाडौं । संगठित अपराध वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाइसकेका व्यक्ति पनि नेपालको राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्थासहितको मस्यौदा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सर...
सरकारले देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न २५ सांसद प्रस्तावक र २५ सांसद समर्थक चाहिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुरुपको राष्ट्रपति–उपराष...
काठमाडौं । पर्यटकीय क्षेत्र चाबहिल-बौद्धको मूल सडकनजिक जग्गा भाडामा लिँदा प्रतिआना कति मोल तिर्नुपर्ला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने पशुपति विकास कोषले हायात रिजेन्सी होटललाई दिएको जग्गाको भाडा ...
देउवाका अस्थिर सय दिन
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 'हनिमुन' समय समग्रमा उनकै कार्यशैलीले गर्दा आलोचित बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि उनले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पार...
काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीलाई समेट्ने परम्परालाई तोड्दै यसपल्ट ‘क्याडर' बाट मात्र स...
काठमाडौं । आँखा बैंक’ले आँखाको नानी संकलन कार्यलाई पशुपति आर्यघाट केन्द्रित गरेको छ । मृत्युपछि आँखाको नानी व्यक्तिमा प्रत्यारोपण सफल बनाउन बैंकले पशुपति आर्यघाट र विद्युतीय शवदाहगृहसम्म आफ्नो कार्यक...
कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण हाबी भएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले अब बन्ने संघीय संरचनामा राजनीतिमा सहभागी भए कर्मचारीलाई ठाडै बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकारसहितको कानुन तर्जुमा गरेको छ ।, सामान्य प्रशा...
चुनावको मुखमा बाँडिदैछ १० अर्ब
काठमाडौं । सांसदहरुको पदावधि ३८ दिनमात्रै बाँकी छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको घोषणा भई आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । आजको कान्तिपुरमा मूख्य खबर छ । तर यतिबोला सरकारले म्याद सकिन लागेका सांसदहरुमार्फत अर...
गृहनगर जोगाउन विमलेन्द्र निधिलाई धौधौ
काठमाडौं । नेपाली काग्रेसका शिर्ष नेतृत्वहरु यती वेला चुनावी प्रचारका लागी मधेशमा छन । सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितको टोली मधेशमा चुनावी प्रचारको क्रममा संचारमाध्यमहरुसंग प्रस्तुत हु...
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको समेत मिलेमतो देखिएको छ । जग्गा खरिदमा निगम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र संसदीय समितिमा पदाधिकारीहरूको बयानल...
उपकुलपति प्रा.डा. खनियाँ कांग्रेसका अन्तर्घाती अरु को-को ?
काठमाडौं २८ भदौ । स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारविरुद्ध घात गर्ने कांग्रेसी कार्यकर्ताको सूचीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ पनि परेका छन् । कांग्रेस महासमिति सदस्यसम...
बाँदरको सेल्फी विवाद सुल्झियो : फोटोग्राफरको जित
काठमाडौं । बाँदरको सेल्फी विषयलाई लिएर दुई बर्ष अगाडी पशु अधिकारकर्मीले दायर गरेको मुद्धामा फोटोग्राफरको जित भएको छ । ईन्डोनेशियाको जंगलमा सन् २०११ मा मकाक प्रजातीको नारुतो नामक बाँदरले न्यु साउथ वेल...
मुलुकभित्र रेलमार्ग तयार भए पनि गुडाउने रेल नहुँदा स्वदेशमै रेल चढ्ने नेपालीहरुको चाहना पूरा हुन अझै समय लाग्ने भएको छ । भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्मको रेलमार्ग आगामी फागुनमा तयार हुँदै...
आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा मन्त्रीनै अगाडी
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख र राज्य सञ्चालनको महत्वपुर्ण हैसियतमा पुगेका ब्यक्ति नै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघन गर्ने घट्नामा संलग्न रहेको पाईएको छ । ...
भिसा प्रोसेसिङ निजी कम्पनीलाई दिने तयारी
अध्यागमन विभागले भिसा प्रोसेसिङको काम निजी कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाएको खबर आजको कारोबारमा छ । सातवटै प्रदेशको सीमा, नाका तथा प्रदेश राजधानीबाट प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्ने कागजातसम्बन्धी प्रोसेसिङ...
भूपूलाई विलासी सुविधा विधेयक पारित गर्न चलखेल
संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउने चलखेल सुरु भएको छ । महिनौंदेखि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र रहेको पूर्व विशिष्ट प...
खडकालाई कारबाही प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा
काठमाडौं । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रमुख कार्यकारी गोपाल खडकालाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुने भएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा कैफियत भेटिएका...
काठमाडौं । कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी थालेका छन् । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका नेताहरूले खुलेर निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा गरेका छैनन् । आफूहरूले लड्दै आएको परम्...